Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 23 Febroary 2013
Raha niverina tao Arabia Saodita ny Andron'ny Fahavinirana tamin'ny 11 Martsa 2011, mpanao fihetsiketsehana vitsy dia vitsy ihany no tonga nanao fihetsiketsehana sy nihantsy ny fisian'ireo polisy marobe. Anisan'iray tonga tamin'izany i Khaled al-Johani. Niresaka taminà vondrona mpanao gazety i l-Johani izay notarihan'ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny Fifandraisana tao amin'ny toerana...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Febroary 2013
Nitsahatra amin'ny fikatrohany ilay bilaogera-mpaka sary malaza amin'ny fitantarana ny herisetra mihatra amin'ireo mpanao fihetsiketsehana tsy manan-tanindrazana ao Koety, nanoratra tao amin'ny Twitter izy fa novonoina sy noteren'ireo manampahefana hanao izany. Mampiasa solon'anarana “حمقان البدون” midika hoe “Bidoune tezitra” (Arabo tsy manan-tanindrazana) izy. Fantatra amin'ny fampiasana sary ahitana ny herisetran'ny...
Amerika Latina 20 Febroary 2013